Abakhiqizi Bohlelo Lokuphamba Ngogesi | I-China I-Factory Brewing System Factory & Abahlinzeki
Uhlelo lwe-300L Electric Heating Brewing
Igama lomkhiqizo: Amandla we-Electric Heating Brewing Capacity: 300-600L Umsebenzi: Kuhlelo lonke lokuphisa, kunezingxenye ezimbili zokusebenzisa ukufudumeza kukagesi, enye i-mash tun, enye i-kettle. Ukushisa kagesi iMash Tun yisikebhe esisetshenziselwa inqubo yokuxuba ukuguqula isitashi esisanhlamvu esichoboziwe saba ushukela wokuvutshelwa. I-mashing tun / kettle yenziwe ngensimbi engagqwali noma ngethusi. Umlilo oqondile iMash Tuns ufakwe ngamakhaza ukuze kugcinwe izinga lokushisa njalo. Kufaka phakathi i-Direct fire combustio ...
Uhlelo lwe-500L lokushisa kagesi
Igama lomkhiqizo: Amandla we-Electric Heating Brewing Capacity: 50-300L Umsebenzi: Kuhlelo lonke lokuphisa, kunezingxenye ezimbili zokusebenzisa ukufudumeza kukagesi, enye i-mash tun, enye igedlela. Ukushisa kagesi iMash Tun yisikebhe esisetshenziselwa inqubo yokuxuba ukuguqula isitashi esisanhlamvu esichoboziwe saba ushukela wokuvutshelwa. I-mashing tun / kettle yenziwe ngensimbi engagqwali noma ngethusi. Umlilo oqondile iMash Tuns ufakwe ngamakhaza ukuze kugcinwe izinga lokushisa njalo. Kufaka phakathi ukushisa komlilo okuqondile ...
Uhlelo lwe-1000L lokushisa kagesi
Kuhlelo lonke lokuphisa, kunezingxenye ezimbili zokusebenzisa ukufudumeza kukagesi, enye i-mash tun, enye igedlela.
Ukushisa kagesi iMash Tun yisikebhe esisetshenziselwa inqubo yokuxuba ukuguqula isitashi esisanhlamvu esichoboziwe saba ushukela wokuvutshelwa. I-mashing tun / kettle yenziwe ngensimbi engagqwali noma ngethusi.
Umlilo oqondile iMash Tuns ufakwe ngamakhaza ukuze kugcinwe izinga lokushisa njalo. Kubandakanya igumbi lokushisa umlilo eliqondile, ushimula nedivayisi yokuphepha.